Uma kudingekile, dala engenzi nzuzo kuphakama ngokunengqondo ngenxa nempikiswano izinhlobo izinhlangano ezingenzi nzuzo. Okokuqala, siphawula ukuthi engenzi nzuzo - eqinisweni, ibe inhlangano engokomthetho kalumisi njengoba inhloso enkulu yokwenza ukusebenza ngezimali. Lena isici esiyinhloko ukuthi ehlukanisa amafomu enhlangano nezinhlaka zomthetho kwezinhlangano ezingenzi inzuzo nezinhlangano ezingokomthetho ukuze enze ibhizinisi.
Mangisho ukuthi amafomu enhlangano nezinhlaka zomthetho kwezinhlangano ezingenzi inzuzo ahlukahlukene elicacisiwe umthetho. Babengase babhekwe izinhlangano zezenkolo kanye nomphakathi, ukubambisana, okungezona zokuhweba injongo, futhi izisekelo, izikhungo, kwezinyunyana nezinhlangano. Kufanele kuqashelwe ukuthi uhlu inhlangano engenzi inzuzo alupheli. Ukuze engenzi nzuzo iye esebenza ngempumelelo, kufanele baqonde futhi baqonde wona ngokwawo ukuthi imigomo it landela ukudalwa inhlangano yawo ibe esemthethweni. Ngaphezu kwalokho, isidingo ukuxazulula izinkinga eziningi enhlanganweni, ngokukhethekile, bangaki amalungu kuyoba yingxenye yenhlangano embuzweni bese kungaba ukuqala abasunguli entsha.
Nquma izimpokophelo kumiswa izinhlangano ezinjalo umthetho UKUCHAZISISA amakilasi kubhekwe uhlobo izinhlangano. Kungenzeka ukuthola kwezinkambiso zomthetho, ekhomba ngqo yokuthi inhlangano engenzi inzuzo wadala ukufeza izinjongo kwamasiko, esayensi, ezemfundo, ezamasiko nezinye. Ngaphezu kwalokho, umgomo kubhekwe uhlobo izinhlangano ngenxa eside ezifana amafomu wezomthetho izinhlangano ezingenzi nzuzo. Kukhona imigomo zangaphakathi nezangaphandle. Uma inhlangano is wadala ukuxazulula izinkinga amalungu kuphela inhlangano esinjalo, kuba kuphela ngenhloso amagugu yangaphakathi. Uma injongo yenhlangano siyingozi izinkinga amalungu ayo, futhi usiza nabanye abantu, kube umgomo okuqukethwe zangaphandle. Lawa amafomu enhlangano nezinhlaka zomthetho izinhlangano ezingenzi nzuzo.
Ngesikhathi amabhizinisi of ezahlukene-injongo ku Isimo samanje somkhakha intuthuko kwezesayensi nobuchwepheshe izinqubo mayelana nesimo eziyinkimbinkimbi futhi iphikisana lendawo, enquma inqubo besigaba nomphakathi imisebenzi zabasebenzi. Lezi izinqubo zikhonjwe umqondo ezifana uhlobo kwezenhlalo inhlangano ukukhiqizwa.
Phakathi lezi zinhlobo Okubaluleke kakhulu unikezwa lokuhlushwa ukukhiqizwa. Ngesisekelo le lokuhlushwa akhiwa futhi athuthukiswe nezinye izinhlobo izinhlangano, ezihlanganisa de-okuhlushwa lunye, kanye inhlanganisela diversification ukuguqulwa eyengeziwe. Ngayinye yalezi zinhlobo Ifomu Creation ine imvelo inhloso kanye nemingcele yentuthuko.
I lokuhlushwa ukukhiqizwa kubonakala lokuhlushwa izinqubo zokukhiqiza kanye nabasebenzi inkampani, izindlela zokukhiqiza kanye yokuthengisa. Lokuhlushwa practice nezomnotho izinkampani isebenza nge isikhundla kwezomnotho okuhlala njalo, kunezinhlobo ezintathu. Lokhu okuhlushwa aggregate, okuhlushwa inqubo kanye isitshalo umbono yefomu. okuhlushwa ezihlanganisiwe lingamandla okwandisa unit uhlobo, futhi amayunithi futhi imishini kule nkampani. okuhlushwa kwetheknoloji libonisa kweNdikimba workshop neminyango ibhizinisi, ie ukwanda izinga amayunithi ukukhiqizwa. Factory umbono - yinqubo okwandisa usayizi amabhizinisi ngabanye, elingasebenza njengesibuko izimboni kanye emafektri, nezinye amayunithi ezinkulu zokukhiqiza. Le nqubo ibizwa sisekelwe eenkambisweni emakamu okungenhla izinhlobo ezimbili. Ukuze inkampani ukusebenza ngempumelelo, kubalulekile ukuba babe nobunye zonke izinhlobo ezintathu.
Sihlakulela iminwe, noma i-Volchok ngenhla: indlela yokuyiqala ngayo
Indlela ukukhetha saqala esondweni ukuphotha?